Manome alàlana ireo mpamoaka peo amin'ny streaming ny HD HD / SD ny fampitaovana rindrambaiko VITEC NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ny kompositera Vita an'ny kompania VITEC dia mamela ny mpamoaka peo hamoaka horonantsary HD / SD
Ny sangan'asa ara-sary rehetra izay noforonin'ny fampielezam-peo dia fanehoana ny marika ary ny feo ao aoriany. Tsy maintsy ho tsara ny votoatiny ary tsy maintsy manana fiovana estetika maro be io fa tsy olana. Na izany aza, ny hahatongavan'izany, mila fampitaovana tsara ny mpampita fampielezam-peo mba hanehoana tsara ny votoatiny ary hahazoany fanatanterahana mpihaino betsaka kokoa. Ny tsara kokoa ny fampielezam-peo dia afaka manolotra ny tenany, avy eo hanamafy ny fahazoana ny votoatiny, sy ny orinasa iray VITEC afaka manampy amin'ny azy ireo Encoder MGW Ace.
Hatramin'ny 1988, VITEC dia mpitarika eran'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny famaranana horonantsary farany. Nandritra ny telopolo taona mahery, ny orinasa dia mpamatsy fandaharana amin'ny fampielezam-baovao, miaramila sy governemanta, orinasa, fanatanjahan-tena sy toerana fialamboly ary trano ivavahana. VITEC ny H.265 (HEVC) sy ny fanomezana H.264 dia be midadasika indrindra eny an-tsena miaraka amin'ny fitaovam-panodinana sy fanodinana. IPTV vahaolana ho an'ny Desktops sy ny fitaovana finday, karatra sy ny PCI amin'ny SDK noho ny fampidirana tetikasa. VITEC ny Ny vahaolana amin'ny haino aman-jery intuitive dia azo atao mifanaraka amin'ny filan'ny tsena tokana tsirairay avy. Izy ireo dia manolotra teknolojia mora ampiasaina izay manome kalitao avo lenta ambany sy ambany kokoa HD horonan-tsary, fakana sary mivantana sy voarakitra ho an'ny fizarana seamless ao anaty endrika maro isan-karazany, na aiza na aiza, amin'ny fitaovana rehetra. Ary ny HEVC sy HV264 Compact HEVC MGW Ace tsy misy hafa.
VITEC's MGW Ace Compod Hardware Encoder
VITEC's MGW Ace no encoder hardware H.265 / H.264 voalohany eran'izao tontolo izao amin'ny fitaovana matihanina, ambany tongotra, fitaovana fampihenana. Ity encoder ity dia manana famerenam-bokatra HEVC 100% tena misy farany, izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa horonantsary 1080p kalitao miaraka amin'ny fitrandrahana bande bandy 50% raha oharina amin'ireo fenitra H.264 amin'izao fotoana izao. The MGW Ace dia ampiasain'ny VITEC HEVC GEN2 + encoder, ary ny codec ankehitriny dia manohana ny fampidinana an-tariby Ultra-Low Latency (ULL) ao amin'ny HEVC ho an'ny fahitana fitaratra-vera ambany hatramin'ny 65ms.
MGW Ace Manome fahombiazana bebe kokoa ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanomezana ny kalitao avo indrindra IPTV streams over zanabolana rohy, tambajotra tsy miankina ary manerana ny Internet. Ity ambaratonga miparitaka ity dia avy amin'ny filazam-baovao mivantana an-tsaha, fandraisana anjara amin'ny HD horonan-tsary, mivantana mivantana, na an-kianjan'ny fanatanjahan-tena mankany amin'ny fizarana sary an-tsekoly ara-tafika.
The Encoder MGW Ace koa manome ny kalitao horonantsary HEVC tsara indrindra amin'ny kilasy hatramin'ny 4: 2: 2 10-bit ary latabatra mampidira azy hatramin'ny 10ms ao amin'ny mode ULL ho an'ny fisintonana 65ms mahavariana hatramin'ny latabatra fitaratra. Izy io koa dia ahitana ny fanjifana herinaratra ambany raha ampitahaina amin'ireo encoder HEVC miorina amin'ny rindrambaiko izay mandeha amin'ny mpizara maro-CPU lehibe. The Encoder MGW Ace mahatonga ny fanodinkodinana HEVC ho avy any aoriana hihoatra ny efitranon'ny mpizara ary hiditra any an-tsaha ny fangatahana Broadcast miaraka amin'ny fampidirana mora amin'ny tranga fitaterana, kamiao TV, tranga finday, fiara ary fiaramanidina.
The Encoder MGW Ace no rafitra fanamafisana HEVC ISR lehibe indrindra eran-tany voalohany hahazoana ny fanamarinana JITC, izay miantoka ny fandefasana stream IP HEVC MISB-Compliant. Ity encoder ity dia manana fanohanan'ny miaramila metadata KLV / STANAG, izay ahafahan'ny mpiasan'ny governemanta sy ny tafika hampihena ny fampiasana bandwidth amin'ny tamba-jotra mandritra ny famoahana kalitao avo lenta ho an'ny fisian'ny Situational Awareness (SA) na Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR).
Ny fampiharana maromaro an'ny MGW Encoder dia misy:
Satellite Fivoriana vaovao sy fanamafisam-baovao
Fihenam-bolo ambany ho an'ny takelaka ambany amin'ny tambajotra rehetra
Remote / Ao amin'ny trano famokarana (REMI) momba ireo rohy fampitana fitokanana na amin'ny Internet
Mivezivezy ny votoatin'ny Situational sy ny votoaty FMV manerana ny LAN sy WANs
Lahatsary momba ny fiarovana sy ny fanaraha-maso (ISR) avy amin'ny fiara sy ny fiaramanidina eny an-toerana
Full HD 1080p fanaraha-maso sy didy sy fanaraha-maso
Encoding sy multicasting High-Res HDMI / DVI / loharano informatika
Mizara ny fomba fijerin'ny PC Screen amin'ny IP amin'ny mpampiasa an-toerana sy lavitra
Mivezivezy ny horonan-tsary feno Motion mankany amin'ny Desktop, TV ary fitaovana finday amin'ny fantsona voafetra vita amin'ny bandwidth
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny MGW Ace Encoder, tsidiho ny www.vitec.com / vokatra / MGW-Ace.
Nahoana no misafidy: VITEC
Raha manam-pahaizana matihanina miasa amin'ny indostrian'ny fahitalavitra dia manana singa tsara atiny hozaraina, aleo mandeha miaraka VITEC dia tena tsy misy atidoha. Tao anatin'ny telopolo taona taorian'ny nananganana azy, VITEC mpisava lalana eo amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny fitaovana sy ny rindrambaiko ho an'ny fanodinana horonan-tsary, ny fanodinana, ny transcoding, ny firaketana, ny fiovam-po, ny arsiva ary ny fandefasana azy amin'ny IP. Mijoro ho modely ho an'ny fanavaozana, VITEC dia nahomby tamin'ny maha-orinasa voalohany nitondra teknolojia kompresina HEVC mahomby amin'ny sehatry ny fampiasan-dàlana miaraka amin'ny fitaovana finday. Ity karazana fanavaozana ity dia ilain'ireo mpampita vaovao tsara raha te-handray ny marika sy ny votoatiny izy ireo izay manaparitaka izany bebe kokoa ary ho lasa mpihaino be dia be.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny VITEC, Dia tsidiho ny www.vitec.com / an-trano.
fampitana injeniera fampitana Engineering fahitalavitra Compte HEVC & H.264 Hardware Encoder fandraisana anjara vahaolana famaranana horonantsary farany voalohany encoder H.265 / H.264 Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Teknolojia mampidera HEVC Kalitao HEVC kalitao fampidirana IPTV solutions isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw MGW Ace SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows Ultra HD Forum Video injeniera votoaty hita maso Vitec 2020-05-04
Previous: Ny serasera CP dia mampiditra ny studio multipurpose sy ny efitrano fifehezana ho an'ny IRONMAN®
Next: Manokatra LiveLab Amin'ny Mo-Sys amin'ny Panasonic